Ukuphupha ngeChainsaw Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Isilungisi sehedge sesinye sezixhobo zegadi. Isetyenziswa ikakhulu xa kuthenwa iheji okanye izihlahla. Kodwa inokusetyenziselwa ukusika izityalo ngeziqu eziqinileyo, ezinjengee roses.
Iziqwengana zothango ziyafumaneka kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo. Kwelinye icala inokusebenza ngepetroli okanye ngombane. Olu hlobo alufani kangako neshears "eziqhelekileyo", kuba ikhangeleka ngathi ngumsiki wamacala amabini osikiweyo. Nangona kunjalo, izityalo zinokunqunyulwa kanye ngokuchanekileyo.
Kwelinye icala, kukho isinqumli sehedge esisandla, esikwiisentimitha ezingama-60 ubude kwaye sikwabonakala njengesikere. Izibambo ezinde ezenziwe ngomthi zenza isiphumo esincomekayo kwaye iindawo ezinqwenelekayo zezityalo zinokusikwa zicocekile, zihlala zisikwa kube kanye.
1 Uphawu lwephupha «uthango lokusika uthango» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uthango lokusika uthango» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uthango lokusika uthango» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uthango lokusika uthango» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi lutolika uphawu lwephupha "isinquli sothango" njengophawu lwe I-Avariceukuba umphuphi uya kubonisa kwimicimbi yeshishini. Ukongeza, ukubona kweso sixhobo kunokubonisa into engathandekiyo, eya kuthi ibonakale nakwezobuchwephesha okanye kwishishini.
Isithintelo esingalunganga sokucheba ubuthongo, ekunokuthi kwakhona siphulwe bubuthongo, sinako ilahleko wabahlobo kwi el mundo lweewotshi. Oku kunokuba kusekelwe kukuziphatha okuzibaxekileyo kwalowo uleleyo, phakathi kwezinye izinto. Ke ngoko, kuya kuba bubulumko ukucinga ngokutshintsha indlela oziphethe ngayo.
Ukuba umphuphi usika ityholo elihlala liluhlaza ngombala ephupheni, ngokuthetha ngokubanzi, kunokwenzeka ukuba kungekudala ivuleke. Inzuzo kwaye wonwabele iiyure ezimnandi. Ukuthena uthango olungenanto okanye ityholo njengephupha kwelinye icala kunokubonisa iintlungu okanye isenzo sokungxama.
Ngokujonga isimboli yamaphupha "i-hedge trimmer" ngokubanzi, inokubaluleka nalapho isetyenziswa khona. Ukuba eli xesha linokwaziwa ephupheni, izinto ezinophawu "intwasahlobo", "ihlobo", "ukwindla" okanye "ubusika" kufuneka ziqwalaselwe.
Uphawu lwephupha «uthango lokusika uthango» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umntu ujonge uphawu lwe "hedge trimmer" ngokwembono yengqondo, uyabona ukuba isebenza ikakhulu kuyo ulwahlulo ngokweemvakalelo ibonisa. Umphuphi angathanda ukuzinikezela koku, kodwa anciphise kwinqanaba elithile.
Ngamanye amaxesha ukusika uthango nako kungaba nephupha. Ukwahlulahlula Yenza umzekelo ongathanda ukutshintsha into, kodwa hayi ngokupheleleyo. Ngesi sizathu, iphupha lokucheba uthango ngokufuthi livela kwizibini eziqhawule umtshato ezingekazukunxibelelana, umzekelo, nabantwana bazo.
Ukuba isixhobo sokucheba uthango sisetyenziswa njengesixhobo egadini okanye igadi, umphuphi kufuneka aqonde ukuba ungasemva kuluntu abanye abantu banqwenela. Kuba nokuba yena ngokwakhe ufuna ukugcina umgama othile kwabanye, uziva elilolo ngoku.
Kubonwa ngokwesikere, isinqumli sehedge sinako, ngokokuhlalutya kwengqondo kwephupha, kwi Yintlungu yazisa olele ngokungaziphathi kakuhle. Awufuni ukwenza nantoni na engalunganga okanye wenzakalise nabani na ngokuziphatha kwakho.
Uphawu lwephupha «uthango lokusika uthango» - ukutolika kokomoya
Isicoci sehepge njengophawu lwephupha sinokuba sinye ekutolikeni ngokwasemoyeni kwephupha. umsantsa bonisa phakathi kwehlabathi lokomoya kunye nelokwenyama. Ke ngoko, ukuphupha kufuneka kuzame ukuvala esi sithuba kwaye kufezekiswe umanyano phakathi kwala manqanaba mabini.